Karen Student Centre
ကရင်စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုမှ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ထပ်မံထုတ်ပြန် ကြေငြာခြင်း
ကရင်စာပေနှုင့်ယဉ်ကျေးမှုမှထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်းကို အများသိအောင် share ပေးကြပါ
ksc ကျောင်းဘော်လုံးပြိုင်ပွဲ မှတ်တမ်း
(၂၀၁၅-၁၆) ပညာသင်နှစ် ကရင်ကျောင်းသားများရိပ်သာ
ကျောင်းကော်စီဥက္ကဌဒိုင်း ဘော်လုံးပြိုင်ပွဲ အနှစ်ချုပ်
ပြိုင်ပွဲကာလ – သြဂုတ်(၂၄) မှ စက်တင်ဘာ(၄) ထိ
အသင်းအရေအတွက် -(၄) သင်း
အကောင်းဆုံးဂိုးသမား – စောရဲမြင့် (အဝါအသင်း) ဒသမတန်း(E)
အကောင်းဆုံးနောက်တန်း -စောအောင်ဆန်းငယ်(အနီအသင်း) ဒသမတန်း(E)
ပညာရေးကို စိတ်ဝင်စားသော ကရင်အမျိုးသားအပေါင်းတို့ သိစေရန်ကြေငြာခြင်း
” ကရင်အမျိုးသားများနှင့် အခြားသောစေတနာရှင်များ အပေါင်းသို့ ပန်ကြားလွှာ”
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဝေးလံသီခေါင်ပြီး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲသော အထူးသဖြင့်နယ် စပ်ဒေသများရှိ ကရင်အမျိုးသားတို့၏ ကျေးရွာများတွင် ပညာရေးအဆင့်အတန်းအလွန်နိမ့်ကျလျက်ရှိ ပါသည်။ အခြေခံပညာကျောင်းများနည်းပါးခြင်းနှင့် သင်ကြားပြသသည့်ဆရာ/များ မလုံလောက်မှု ကြောင့်လည်းကောင်း ၊ လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြသည့်ဆရာဆရာမအများစုသည် ရပ်ဝေးဒေသ မှဖြစ်ကြခြင်းကြောင့် စာသင်နှစ်မပြီးဆုံးမီပြောင်းရွှေ့ကြသော အရေအတွက်မှာ များပြားနေပါသည်။ ပြောင်းရွှေ့သွားသော ဆရာဆရာမတို့၏နေရာတွင် အစားထိုးဝင်ရောက်လာသော အရေအတွက်မှာ အလွန်နည်းပါးပါသည်။ သင်ကြားသင်ယူမှုတွင် အလွန်အားနည်းလျက်ရှိပြီး ကျောင်းနေမြဲရေးကိုပါ ထိ ခိုက်စေပါသည်။ ဤကဲ့သို့သောအခြေအနေများကြောင့် နယ်စပ်ဒေသများ၏ ပညာရေးအရည်အသွေး မှာ ဆက်လက်နိမ့်ကျနေဆဲပင်ဖြစ်ပါသည်။
နယ်စပ်ဒေသအသီးသီးတွင်ရှိကြသော အခြေခံပညာသင်ကျောင်းများတွင် ဒေသခံဌာနေဆရာ ဆရာမအများစုဖြင့် ဖြည်းတင်းပေးနိုင်မည်ဆိုပါက ၎င်းဒေသ၏ပညာရေးအရည်အသွေးကို အတိုင်းအ တာတစ်ခုအထိ မြှင့်တင်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ဒေသခံဌာနဆရာဆရာမများမွေးထုတ် နိုင်ရေးအတွက် စီမံချက်ချမှတ်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်နေပြီးဟု သုံးသပ်မိပါသည်။
ဆင်းရဲမွဲတေခြင်း ၊ […]
k.s.c သုံးထပ်မြောက်အဆောင်အတွက် လိုအပ်သော ပြူတင်းပေါက်နှင့်ခြေချော်တံခါးများကို ပါဝင်လှူဒါန်းနှိင်ပါကြောင်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည်
6’x6.5′ အလူမီနီယံပြူတင်းပေါက် တစ်ပေါက်
8’x6.5′ အလူမီနီယံပြူတင်းပေါက် တစ်ပေါက်
7’x3.5′ ခြေချော်အလူမီနီယံတံခါးပေါက် တစ်ပေါက်
7’x4′ ခြေချော်အလူမီနီယံတံခါးပေါက် တစ်ပေါက်
လါလ်ုဆီ့ဏီ့္ဘိင်း (Months of the Year)
အခုတခါကတော့ တနှစ်ပတ်လုံးမှာရှိတဲ့ လတွေရဲ့ အမည်တွေပါ။ မူၟနဦု့မူၟ (Days of the Week)
ရက်သတ္တပတ်အမည်တွေကို ပိုးကရင်(အရှေ့၊ အနောက်)ဘာသာတွေနဲ့ အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာဘာသာတွေ နှိုင်းယှဉ်ပြီး ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ စကောကရင်ဘာသာလည်း ထည့်သွင်းပါမယ်။ အသံထွက်နားထောင်ဖို့အတွက်လည်း အသံထွက်ဖိုင်လုပ်ဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။ လူအင်အားအရရော၊ နည်းပညာပိုင်းအရရော၊ ငွေကြေးပိုင်းအရပါ	ဖံႜုလိက်ခင်းထါ်
အခု တင်ထားတာတွေက DRAFT တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အချောဖြစ်ဖို့အတွက် မိတ်ဆွေများထံက အသံတွေကို နားထောင်ပြီး ပြင်သင့်တာတွေ ပြင်ပါအုံးမယ်။
ပိုးကရင် ဗျည်း (၃၆) လုံး အသံထွက်ကို	more posts
မျိုးဆက်သစ်တို့ အတုယူရမည့် သူတဦး
ကျနော် ဥပဒေ ဘာသာရပ် အထူးပြုနဲ့ ပုသိမ် တက္ကသိုလ်မှာ တက်ရောက် ပညာသင်ကြားခွင့် ရခဲ့တာ အခု စာသင်နှစ် နဲ့ဆိုရင် သုံးနှစ် ရှိခဲ့ပြီ။ တိုက်ဆိုင်စွာပဲ	ချစ်သမီးသို့ … ရေဆန်
ရဲရဲဖြတ်လော့ သမီး …။	ကျနော် သိသော ပဒိုမန်းရှာ
စာရေးသူသည် သူ့နှင့် မှတ်မှတ်ရရ သုံးကြိမ်သုံးခါ ဆွေးနွေးပြောဆို ခဲ့ဖူးပါ၏။ အဆင့်အတန်း ခွဲခြားမှု မရှိသော၊ ပကာသန ကင်းရှင်းသော၊ တည်ကြည်၍ အမျိုးသားရေး ကိစ္စများ၌ မှန်ကန်ရိုးသားသော	more posts
ဖတ်မိတာတွေ ကြိုက်နှစ်သက်မိတာတွေကို ပြန်ပြီးဝေမျှချင်ပေမယ့် ဘယ်ကစပြီး ဘာအကြောင်းအရာကို ဘယ်လိုရေးရမယ်မှန်း မသိဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဒီတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ချိုတကူးကနေ စကြည့်ကြရအောင်။
ချိုတကူး ဘယ်သူလဲ … ဒီမှာကြည့်ပါ
စာရေးဆရာ အောင်သင်းရဲ့	more posts
ဖားစည်နှင့်ပတ်သက်သည့် ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်တပုဒ် ရှိပါသည်။ ဖားစည်ကို ဖူးမော်တော(ဖူးဒိုင်)က မျောက်တို့ထံမှ ရရှိသည်ဟုဆိုပါသည်။ ထိုပုံပြင်ကို ပြောဆိုရာ၌ အနည်းငယ် ကွာခြားချက် ရှိကြသော်လည်း ဆိုလိုရင်းမှာ အတူတူပင်ဖြစ် ပါသည်။
ရှေးအခါက	more posts
လိုအပ်သူအချို့အတွက်ပေါ့ဗျာ။ ဒဒွေး ဒုက္ခပေးနေတယ်ဆိုရင် ဒီမှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ သိတဲ့အတိုင်းပဲ။ Adobe ထုတ်ကုန်တွေမှာ ဒဒွေးဒုက္ခပေးနေတာ ကြာပါပြီ။ နေရာကလဲ တခုနဲ့တခု မတူပြန်ဘူး။
အခုကျနော်ပြောမယ့်နေရာတွေကတော့ CS2 version အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။	Merge / Split Files
merge ဆိုတာ ပေါင်းတာဖြစ်ပြီး split ကျတော့ ခွဲထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ အင်တာနက်ထဲ ရှဲမယ့်ဖိုင်တွေကို အပိုင်းအပိုင်းလေးတွေ ခွဲထုတ်ဖို့လိုပါမယ်။
အင်တာနက်ထဲ ဖိုင်တွေ တင်မယ်ဆိုရင် အများအားဖြင့် ဖိုင်ဆိုဒ်	ပျောက်သွားတဲ့ ဖိုင်တွေ ပြန်ရဖို့
ပို့စ်အဟောင်းက လင့် ပျက်သွားလို့ အသစ်ပြန်တင်ပေးလိုက်တာပါ။ အဆင်ပြေကြပါစေဗျား …
နောက်ကိုလည်း လင့်တွေပျက်သွားရင် အကြောင်းကြားပေးပါ။ ကျေးဇူးတွေ စုထားပါမယ်။
ယူအက်စ်ဘီ ဒရိုက်ကလေး ဗိုင်းရပ်စ်ကိုက်သွားလို့ ဖိုင်တွေ အားလုံး ပျောက်သွားသလား။	more posts
Kwekabaw Keyboard, Zwekabin Font, Unicode
Zwekabain font ကိုသုံးပြီး ကရင်စာတွေ ရိုက်ဖို့အတွက် Kwekabaw Keyboard အသစ် ထပ်ရေးလိုက်ပါတယ်။ အခု ကီးဘုတ်အသစ်က စကောကရင်စာအတွက် အဓိက ရည်ရွယ်တဲ့ အတွက်	ဘာလဲဟဲ့ မြန်မာ ယူနီကုဒ်
ဘာလဲဟဲ့ မြန်မာ ယူနီကုဒ်
January 16, 2011 at 4:44pm
ဇော်ဂျီနဲ့ ကောင်မလေးတွေကို ချက်မလား သူများတွေပြောပါတယ် အစဉ်ပြေလို့၊ Web Site တွေကို ကြည့်မလား	ဇော်ဂျီကမလား၊ ယူနီကုဒ် မလား
ယခု စပ်ကူးမတ်ကူး ကာလလေးမှာ တော်တော်များများ ခေါင်းစားနေရ တဲ့ ပြဿနာ ဖြစ် ပါတယ်။ မြန်မာ့ အင်တာနက် ကွန်ရက်မှာ ဇော်ဂျီပဲ သုံးရမလား၊ ယူနီကုဒ်ပဲ	more posts
ကျောင်းသားကပြောသော မရယ်ချင်ရယ်ချင် ရယ်နေရသော ဟာသပါ
လွဲလွဲလေးလည်း ကောင်းပါတယ် (၄) A boy named Sue
သီချင်းနာမည်က A boy named Sue။ စူးလို့ အမည်ရတဲ့ ကောင်လေးတဲ့။ အဆိုရှင်က Johnny Cash။
Sue စူး။ ကျနော်တို့ဆီမှာဆိုရင်တာ့ ပန်းပေါ့။ ဖြူဖြူပေါ့။ သဇင်ပေါ့။ စူးဆိုတာ သူတို့ဆီမှာ မိန်းကလေးတွေကိုသာ မှည့်ပေးတဲ့ နာမည်။
ကောင်လေးတယောက်ဟာ စူးလို့ အမည်မှည့်ပေးခံရတယ်။ သူ့အဖေ အိမ်ကထွက်သွားတော့ သူ့ကို အဲဒီနာမည် မှည့်ပေးခဲ့တာ။
အဲဒီအတွက် သူ့ငယ်ဘ၀တလျှောက်လုံးမှာ ရန်ပွဲတွေ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ သူ့ကိုတွေ့ရင် မိန်းကလေးတွေက မကြားတကြား ရယ်မောကြတဲ့အတွက် သူအရှက်ရခဲ့ရတယ်။ ယောက်ျားလေးတွေ သူ့ကို လှောင်ပြောင်ရင်တော့ ထိုးပွဲဖြစ်ပြီပေါ့။
ဒါနဲ့ သူအရွယ်ရောက်လာတော့ အဖေကို လိုက်ရှာပါလေရော။ တွေ့ရင်သတ်ဖို့။ ဒီနာမည်ကို သူအတော်မုန်းတယ်။
နောက်ဆုံးမှာ သူရှာတွေ့ပါပြီ။ ကဲ တွေ့တော့ ဘာဖြစ်မလဲ။ သူတကယ် သတ်မှာလား။
မူရင်း အင်္ဂလိပ်လိုနဲ့ ကျနော် အကြမ်းဖျဉ်း […]
လွဲလွဲလေးလည်း ကောင်းပါတယ် (၃) The Italian Man Who went to Malta
တခါက အီတလီလူမျိုးတယောက် နိုင်ငံခြားသွားပါသတဲ့။ အင်္ဂလိပ်စကားပြော မပီတဲ့အတွက် တဖက်နဲ့တဖက် နားလည်မှု လွဲကြပုံလေးကို တင်ပြထားပါတယ်။
The Italian Man Who went to Malta ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတိုလေးကို အင်တာနက်လိုင်းကောင်းရင် http://youtu.be/m1TnzCiUSI0 ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ပြောစကားလေးတွေကတော့ …
One day I´m going to Malta toabig hotel.
In the morning I go down to eatabreakfast.
I tell the waitress that I wanna two pieces of toast.
She brings me only one […]
လွဲလွဲလေးလည်း ကောင်းပါတယ် (၂) Me Three
ဟိုးအရင်ခေတ်။ ဗမာပြည်က နိုင်ငံခြားသံဝန်ထမ်းတွေ။ အင်္ဂလိပ်စကား ကောင်းကောင်းရခဲ့ကြပေမယ့် ခုခေတ် မှာတော့ တော်တော့်ကို ညံ့သွားကြပြီဆိုပြီး မြိတ်(ဘိတ်)မြို့က ညီမလေးတယောက်က သူကြားဖူးတာကို ဒီလို ပြန်ပြောပြပါတယ်။
တခါကတဲ့။ မြန်မာသံအရာရှိတယောက်နဲ့ အမေရိကန်သံအရာရှိတယောက်တွေ့ကြတဲ့အခါ။ အမေရိကန်သံက ပြောတယ်။ ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံမှာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ တော်တော် ဆိုးဝါးတာဘဲနော်တဲ့။ ဒီတော့ မြန်မာသံက ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံမှာရော လူမည်းတွေအပေါ် အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တာ မရှိဘူးလားတဲ့ အဲသလို ပြန်မေးခဲ့တယ်။ စကားတတ်မြောက်မှုအရရော၊ ချက်လက်နဲ့ ပြန်ပြောနိုင်မှုအရရော ကောင်းကောင်း ယှဉ်ပြီး ပြောနိုင်ခဲ့ကြတယ်။
ဒီဘက်ခေတ်မှာတော့။ တခါကတဲ့ မြန်မာသံအမှုထမ်းတယောက် မလေးရှားမှာလုပ်တဲ့ အာဆီယံနိုင်ငံတွေအတွက် ဂျပန်အကူအညီ ဆိုတဲ့ ဖိုရမ်လား၊ တွေ့ဆုံပွဲလား အဲသလိုပွဲမျိုး သွားတက်တယ်။ ကော်ဖီသောက် နားချိန်မှာ ဂျပန်နိုင်ငံ တာဝန်ရှိသူနဲ့ မလေး၊ အင်ဒို၊ မြန်မာတို့က […]
လွတ်မြောက်မှုအတွက် ရုန်းကန်ရာမှာ စည်းလုံးညီညွှတ်မှု မရှိ၊ ဦးဆောင်သူမဲ့ ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင် ခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့ အခြေအနေကို ဖော်ညွှန်းထားတဲ့ ကရင်လူငယ် သရုပ်ဆောင် များရဲ့ ကြိုးပမ်း တင်ဆက်မှု "စ်ါခုလုက်" (အကယ်၍)
မြန်မာစာတန်းထိုး ပိုးကရင် ဗီဒီယို ဇာတ်လမ်း။ ၂၀၁၄ နိုဝင်ဘာ (၇) စတင်ဖြန့်ချိမည်။ ဆက်သွယ်ရန်- စ၀်ယှးဖ၀့် (ဖလုံပညာ့တဝေါ့င့်)၊ ဖုန်း ၉၅၉၃၁၁၈၁၆၀၀၊ မဲဘောင်ရွာ၊ လှာကမြင် ကျေးရွာ အုပ်စု၊ ဖားအံမြို့နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်
ဇွဲကပင် ဖောင့်၊ ကီးဘုတ်	Kwekabaw KB (Normal)New
Zwekabin KB (Normal)
Zwekabin KB (Tide)
ခွဲါက႟င်ဟှင် – အေစီYou need to install or upgrade Flash Player to view this content, install or upgrade by clicking here.
ရှူဵမှုပှဖျိဨ ထံဈထဵကျိဨYou need to install or upgrade Flash Player to view this content, install or upgrade by clicking here.
ဖြတ်ကာသွားတယ် မနားတယ်You need to install or upgrade Flash Player to view this content, install or upgrade by clicking here.
loeki de paris – kagemu (ဂျပန် သိုင်း)You need to install or upgrade Flash Player to view this content, install or upgrade by clicking here.
ကွန်ပြူတာ သင်ခန်းစာ စာအုပ်များ	၀င်းဒိုး XP အခြေခံ
ရုပ်သံသတင်း စာမျက်နှာများ	ဗွီအိုအေ
ကရင် စာမျက်နှာများ	Karen National Union
Karen Community Association (UK)
ထော်မဲပါ - ကော်သူးလေ
OKRSO Family World
ကွန်ပြူတာ နည်းပညာ စာမျက်နှာများ	Mystery Zillion
သတင်း စာမျက်နှာများ	ဘီဘီစီ
© Copyright Karen Student Centre 2016 • All rights reserved.	WordPress • WordPress Themes • XHTML